Dealer Signature Tracker: onye nlekota ihe nlekota nke roulette!
Aka ndị na-ere ahịa ọ na-emetụta ọnụọgụ mmeri na roulette? Ọ bụrụ n’ezie adịghị emetụta nsonaazụ ya, kedu ihe kpatara na onye na-ere ahia na-agbanwe nkeji 30 ọ bụla ma ọ bụ karịa na ntanetị dị ndụ na ntanetị? Chọpụta ya Dealer Signature Tracker!
Okwu mmalite ka Dealer Signature Tracker
Kedu ihe bụ nke a Dealer Signature Tracker? Ọ bụ ngwá ọrụ egwuregwu roulette nke na-enye gị ohere ịgbaso ma nyochaa mpịakọta ndị croupier site na ọdịdị geometric.
Ihu ọma na nke a mbụ tracker ị ga-enwe ike iji anya nke uche a na-adịgide adịgide agaghịkwa nanị site a space ele ihe anya (igbu oge, frequencies, wdg), kama kama n'okpuru a ọhụrụ visual profaịlụ, jikọrọ e kere eke nke geometric nakawa etu esi.
Tupu ịga n'ihu na-agụ m na-akwado ka ị ghara igwu egwu software, n'ihi na enwere ike ịtọ ha ka onye ọkpụkpọ tufuo ihe karịrị 2,7% nke ụtụ a tụrụ anya maka ezigbo roulette.
Ebe dị anya na roulette
Echiche mbụ nke ụzọ a sitere na usoro nke m gụrụ ogologo oge gara aga na saịtị laroulette.it, ebe onye ọkpụkpọ, n'okpuru aha nzuzo nke Gimbo, kọwara ụzọ ọ na-egwu: nọmba ọ bụla kwekọrọ na ọnọdụ na roulette nke anaghị eso.iwu ezi uche dị na ya, malite na efu, na klọọkụ anyị na-ahụ nọmba 32 na ọnọdụ 1, 15 na ọnọdụ 2 wee ruo 26 na ọnọdụ 36.
N'aka ozo, oburu na anyi guo onu ogugu ndi ozo na ntaneti, anyi nwere na 26 no na onodu 1 na 32 no na onodu (anya) 36.
Ọnọdụ anụ ahụ dị n'etiti ọnụọgụ abụọ roulette bụ n'ihi nsonye ọnụ ọgụgụ igbe ndị kewara ha.
Ebe a nwere ike ịdị site na 0 (mgbe ọ na-atụnyere nọmba ahụ ugboro abụọ ma ọ bụ karịa), rue ihe ruru iri atọ na isii.
Otu dị na Dealer Signature Tracker
Enweghi uzo isii, iri ma obu ihe ndi ozo, naanị uru bara uru bu ebe di anya.
The anya na-katalọgụ dị iche iche nke isii consecutive nọmba na wiil kewara dị ka ndị a:
Otu +1: ụzọ dị site na 1 ruo 6
Otu +2: ụzọ dị site na 7 ruo 12
Otu +3: ụzọ dị site na 13 ruo 18
Otu -1: uzo site na 19 ruo 24
Otu -2: uzo site na 25 ruo 30
Otu -3: uzo site na 31 ruo 36
Ebe dị anya 0 (mgbe ọnụọgụgụ nke emegharịrị ugboro ugboro) ga-adaba na otu 0, nke, agbanyeghị, na-eme ya na omume naanị otu, agaghị adị ka ndị otu gara aga.
Ọnọdụ nke otu dị iche iche adịghị anya, mana ọ na-agbagharị na ndabere nke ọnụọgụ ikpeazụ enyere, ọzọ, a naghị atụle ọnọdụ zuru oke nke ọnụ ọgụgụ na cylinder ahụ, mana otu a kwekọrọ na anya n'etiti nọmba abụọ.
Iji chọpụta otu ọfụma, ọ dị mkpa iji gbakọọ ọnọdụ ahụ maka ntụgharị ọ bụla, ọrụ nke ngwanrọ ga-arụ ọrụ nke ọma ka emechara.
Ihe eserese na Dealer Signature Tracker
Ngalaba nke anya n'ime ihe di nma na nke ojoo na-enyere anyi aka nke ukwuu na oge nke ihe nnọchianya eserese nke ọnụnọ ahụ, n'eziokwu, na-eji eserese XY eserese abụọ, anyị ga-enwe na abscissa (X axis) na-anọchite anya ihe dị iche iche ( spin) na otu (Y axis) dị iche iche.
Lotmepụta eserese dị anya n'ebe a na-adị mfe: na ntụgharị nke ọ bụla a na-enyocha otu kwekọrọ na axis Y na akara ngosi ahụ nwere akara.
Nwere ike mgbe ahụ soro dị iche iche ihe na a akara na mgbe ahụ anyị ga-enweta ihe osise ụdịdị nke na-emekarị nke anya n'ihi na nnọkọ nke dealer anyị na-nlekota.
Ya mere edepụtara oge ọ bụla n'ụzọ doro anya na ọ bụ site na nyochaa eserese ndị mepụtara ka ị nwere ike ịnwale ịkọwa ha, ma ọ bụ gbalịa ịchọta ụkpụrụ, echiche ga-aka mma karịa, nke ahụ bụ ọnọdụ ma ọ bụ omume n'ụzọ ụfọdụ a ga-esi mata iji mee ihe ma tinye ya n'ime egwuregwu.
Iji Dealer Signature Tracker
Ozugbo agbachi koodu abanyela, bọtịnụ abụọ 'Mfe' na 'Pro' na windo mmemme ahụ ga-arụ ọrụ.
Mfe version: nke a bụ nsụgharị nke usoro ihe omume nke a na-eji naanị eserese nsuso eme ihe, na-eme ma na-eche nche na klọọkụ na elekere anya dị ka otu ihe ngosi anya.
Versiondị pro: bụ nsụgharị nke nwere eserese okpukpu abụọ, otu maka ntụgharị na klọọkụ na otu maka ndị na-aga elekere anya, na ọnụ ọgụgụ na nchekwa na-akpaghị aka.
A kọwara ọtụtụ usoro iji usoro Pro n'oge na-adịghị anya na ngalaba 'DSTracker Method'.
Dealer Signature Tracker Mfe mbipute
Dịka e kwuworo, iji mmemme ahụ dị mfe ma na-enweghị nghọta, agbanyeghị ndepụta nke isi ọrụ bụ ihe a ga-emerịrị: nke mbụ, na-ebugharị cursor òké ahụ n'otu igodo mmemme ahụ iji hụ nkọwa dị nkenke nke kwekọrọ na ya. arụ ọrụ na-egosi.
Naanị na mmalite nke egwuregwu egwuregwu anyị ga-abanye nọmba 2 ikpeazụ na igbe 'Ikpeazụ 2 Spins', wee tinye nọmba ahụ abanyela na ngalaba mbụ na elu ma dabere na ntụpụ nke mmalite (CW = Clockwise CC = Na-aga n'ihu) nke usoro na - esote, pịa 'CW' ma ọ bụ 'CC'.
Mgbe ọ bụla igba egbe ọ bụ ya mere ọ dị mkpa iji tinye nọmba na elu panel na pịa 'Record'.
Site ugbu a gaa n'ihu ọ ga-abụ mmemme akpaghị aka iji gbanwee site na CW gaa CC ma anyị ga-abanye naanị okwu ikpeazụ ewepụtara na ngalaba ahụ wee pịa bọtịnụ ndebanye.
Site na ịpị bọtịnụ ahụ Record, na 'Ikpeazụ #' panel a ga-etinye nọmba ahụ ewepụtara na-akpaghị aka (ọ bụrụ na enwere mperi ọ ga-ekwe omume iji aka gị gbanwee nọmba ahụ) yabụ naanị na anyị ga-pịa na panel anya ịhọrọ ebe dị anya nke anyị chọrọ ịchọta wee pịa bọtịnụ ahụ Gosi Nọmba tingkụ nzọ (na-egosi nọmba nzọ).
Site na ịpị bọtịnụ ahụ na-eto eto, anyị ga-enwe ike ịhụ ebe edoziri nọmba ndị a na wiilị, ka anyị wee nwee ike ịgbaso mgbada nke bọọlụ na igbe mmeri.
Iji mee ka eserese ahụ pụta, pịa na wiilị roulette, nke ga-apụ n'anya ozugbo.
Nke a bụ eserese eserese nke Croupier mebere, buru n’uche na n’ime Mdịdị Mfe, isi okwu ọ bụla na - anọchi anya na klọọkụ na - emegharị.
N’aka nri nke eserese ị ga - ahụ, bido n’elu:
ndepụta nke anya ụgbọ mmiri;
ọnụ ọgụgụ dị anya nke ederede (ntụgharị) n'oge nnọkọ ahụ, nke kwekwara na ọnụ ọgụgụ nke isi na eserese ahụ.
Mgbe ahụ enwere bọtịnụ (ọbara ọbara X) iji hichapụ naanị njedebe ikpeazụ / anya abanye, ọ bụrụ na ịchọrọ ịhichapụ, dịka ọmụmaatụ, ụzọ iri mbụ abanye, pịa ugboro abụọ na anya nke mbụ na ndepụta ahụ wee megharịa ọrụ ahụ ugboro ole ị chọrọ.
N'ikpeazụ, gaa n'ihu, ị ga-ahụ akụ akụ igodo iji lelee peeji nke eserese nwere ike ịnwe ihe karịrị 25 isi na ibe ọ bụla.
Naanị na mbipụta Mfe, ekele maka eserese nke abụọ dị na ala, ọ ga-ekwe omume ịkwanye na ịtụle nnọkọ echekwara na mbụ (nke doro anya na Croupier n'onwe ya), iji chọpụta myirịta dị.
Ihe eserese nke abụọ a bụ ya maka ndụmọdụ naanị, yabụ ị ga-enwe ike pịgharịa peeji na-aga n'ihu / azụ.
Council: ma ọ bụrụ na ị nwere ọtụtụ nnọkọ nke otu Croupier, mepụta otu faịlụ (naanị idetuo / mado faịlụ dị iche iche ederede) ma jiri ya na mmemme ahụ site na ịpịgharị peeji nke ịchọta nke kacha dị nso na nnọkọ dị ugbu a.
N'ikpeazụ, dị ka ọ dị mfe nghọta, a na-eji bọtịnụ ndị a maka:
gosi / zoo ogwe onu ogugu na nhazi oge;
gbanwee na ngosipụta nke Pro;
hichapụ data niile (anya na eserese) nke oge a.
Oge Nchịkwa (Mfe)
E kewara usoro nlekọta oge: Oge nke A (nnọkọ na-aga n'ihu) e Oge Zọrọ (echekwara nnọkọ).
Oge nke A: a na-eji bọtịnụ ndị ahụ echekwa oge echekwara, iji chekwaa ya na ịchekwa ihe osise nke eserese ahụ maka ịjụ ajụjụ n'ọdịnihu.
A na-echekwa oge niile na faịlụ ederede (txt) nke mmemme ọ bụla nwere ike ịhazi.
Enwekwara ike ịbanye ma aha saịtị ahụ ebe anyị na-egwu egwu, na aha Croupier, nke ga-adị na aha faịlụ ahụ anyị na-echekwa / buru ibu na mgbakwunye na ụbọchị / oge mmemme ahụ na-achọpụta site na elekere nke PC anyị.
Oge Zọrọ: iji kpọtụrụ eserese / nnọkọ gara aga nke otu Croupier ahụ anyị na-akpa nkata, ọ ga-ekwe omume ibudata nnọkọ echekwara, nke a ga-egosipụta na eserese dị n'okpuru ebe anyị hụburu.
M na-echetara gị na nhọrọ a dị naanị na Mfe mbipute, dịka na Pro mbipute, dị ka ị ga-ahụ, akụkụ ala nke usoro ihe omume ahụ na-arụ site na mpịakọta mpịakọta na-agagharị oge, ebe a, dịka ị maara, na a otu eserese anyị nwere ma na awa ma na -emepụta mgbaaka na klọọkụ.
Nchịkọta ọnụ ọgụgụ (Mfe)
Na Mfe nsụgharị naanị ọnụọgụ ọkọlọtọ ka enyere, ya bụ ugboro ole (egosiri na ọnụọgụ na ọnụọgụ), oge dị ugbu a (Oge), oge kachasị elu (MAXD) na CI
CI = ndozi ndozi.
Nkọwapụta nke dị mma bụ oke ọnụ ọgụgụ nke na-anọchite anya usoro mgbakọ nke ihe omume ma gbakọọ ya na usoro nke na-eji oge ihe omume na oge ọ dị ugbu a.
N'ihe dị elu karịa ndozi dị mma karịa 1, o yikarịrị ka ọ ga-abụ ihe osise ọzọ.
Mgbe CI dịkarịrị ukwuu ma ọ bụ hara nhata 1, ụcha mpaghara metụtara ya na-acha uhie uhie iji gosipụta ndapụsị nke sortie.
CI bụ oke kpere onu ogugu, a ga-eji ihe ngosi a mee naanị ma ọ bụrụ na ị maghị ebe anya ị ga-esi ezube, na nke a CI karịrị otu anya ma e jiri ya tụnyere nke ọzọ, ga-enyere anyị aka imeri mkpebi ọ bụla.
Ọnụ ọgụgụ ahụ doro anya gbasara nnọkọ dị ugbu a (akụkụ elu) na nke echekwara (ala) nke ga-egosipụta nke ọma naanị ma ọ bụrụ na anyị etinyela faịlụ echekwara na mbụ.
Dealer Signature Tracker Versiondị Pro
Ihe omume Pro nke usoro a bụ nke ị ga-eji ma ọ bụrụ na ịchọrọ itinye ụfọdụ n'ime usoro ndị akọwapụtara na isi dị mkpa (Usoro DSTracker) nke ị ga-ahụ ma emechaa.
Versiondị a dị iche na nke dị mfe, yabụ ọ bụrụ na, dị ka m nwere olile anya, ị meela ụfọdụ ule na ụdị nfe ahụ, ịtụgharị na mbipute Pro dị mfe.
Ka anyị hụ ọdịiche dị iche iche ozugbo: n'ihe banyere ndenye, ọ nweghị ihe gbanwere, n'eziokwu naanị tinye nọmba anyị hụrụ mgbe ị na-emepe tebụl egwuregwu cha cha, họrọ ntụzịaka nke ntụgharị ọzọ (CW / CC) na mgbe ịbanye nọmba, i nwere na pịa bọtịnụ ọzọ Record.
Ihe dị iche anyị ga-achọpụta ozugbo bụ na e jiri ya tụnyere Mfe, na mbipute Pro, a ga-etinye ebe ndebanye aha maka nke ọ bụla nke grafụ 2 dị ugbu a.
Na omume anyị ga-enwe grafụ abụọ dị iche iche, otu naanị maka ntụgharị klọọkụ na otu maka ịgbagharị na-agagharị.
A ga - akọwa ihe kpatara nke a mgbe e mesịrị n'isiakwụkwọ na Usoro DSTracker.
Ngalaba a dịkwa ka ihe yiri ya ma nwee otu ọrụ ahụ dịka nke Easy version, naanị ihe dị iche bụ na ebe a, na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ kwekọrọ na anya ịkụ nzọ, anyị nwekwara (ozugbo n'okpuru) nọmba isii nke akụkụ dị iche na wiilị, ọ bụrụ na onye ọ bụla chọrọ ịnwale ụzọ ọhụrụ ma ọ bụ nwalee ụzọ ọhụrụ ịkụ nzọ.
Icheta na hover pointer pointer na bọtịnụ ọ bụla iji hụ nkọwa dị mkpirikpi nke arụmọrụ kwekọrọ, ka anyị hụ ojiji nke bọtịnụ ndị a na-amalite site n'elu: padlocks abụọ (ọ bụghị na Easy version) na-enye gị ohere igbochi ntinye nke isi ihe dị na eserese ahụ naanị na ntanetị ma ọ bụ naanị na ntanetị.
Na omume na saịtị ụfọdụ ndị Croupiers na-eme ka wiil ahụ na-atụgharị n'otu ụzọ site na iji ọrụ a, anyị nwere ike iji naanị otu grafụ abụọ rụọ ọrụ, ọ bụrụ na mmemme ahụ agaghị etinye akara maka eserese ọ bụla.
Mkpọchi ndị ọzọ, n'usoro ọdịdị, bụ otu ihe ahụrịrị na nke dị mfe, ya bụ: ngosi / zoo ọnụ ọgụgụ, ngbanwe (laghachi) na mbipute Easy na (X) hichapụ data niile nke oge a.
Nchịkọta Oge (Pro)
Ogwe a na-enye gị ohere ibu ma chekwaa nnọkọ nke eserese abụọ ahụ.
M na-echetara gị na ebe a anyị enweghị ike ibudata (dị ka ọ dị mfe mbipute) usoro echekwara iji tụnyere ha na nke ugbu a, dịka na mbipute Pro a na-enyocha Croupier na-enweghị elebara usoro ndị gara aga anya.
Ya mere, a na-emeputa nnapụta ndị ahụ maka naanị ebumnuche nke ịmụrụ ihe eserese ahụ ma ghọta njehie ọ bụla emere n'ịghọta ọnụ ọgụgụ ahụ.
Na igodo Nchekwa akpaaka ọ ga-ekwe omume ịtọzi nchekwa akpaka nke ma eserese na oge awa na nke oge.
N'ezie, dị họrọ folda (ọ bụrụ na ịnwere Windows 7 ma ọ bụ karịa karịa, ọ ka mma imepụta ya na desktọọpụ) wee kpebie nkeji ole ịchekwa; dabere na akara nke ihe ịchọrọ ịchekwa, usoro ihe omume ahụ ga-arụ ọrụ ya na akpaghị aka na oge ọ bụla echere, oge dị mma!
O doro anya, na ebe a (site na ngalaba gara aga) ị nwere ike tinye aha cha cha na Croupier nke, dị ka ọ dị nfe Mfe, a ga-etinye ya na aha faịlụ echekwara yana ụbọchị na oge nke oge a ga-egwu.
Nchịkọta akụkọ (Pro)
Na nke a panel nke Dealer Signature Tracker anyị na-achọta ọnụ ọgụgụ oge niile: oge, oge ugbu a na oge kachasị elu na CI akọwaworị n'elu.
Ọnụ ọgụgụ ndị a metụtara nnọkọ dị ugbu a ma kewaa ya na eserese na -emeghị aka na ntanetị.
Na mgbakwunye na ọnụ ọgụgụ kpochapụwo, na mbipute Pro enwere, na nchịkọta ọzọ, ọnụ ọgụgụ banyere 'Ogologo'.
Gịnị ka 'Ogologo' pụtara? Ogologo bụ nọmba dị n'etiti otu anya na nke na-esote eserese ọ bụla.
N'iburu n'uche na ebe dị anya dị isii (+ 3 + 2 + 1-1-2-3) ma na-eche na mgbe ogologo oge meghachiri ogologo bụ 0, anyị nwere na ọ bụrụ na mgbe -3 bịara -1 anyị gbagoro ọnọdụ abụọ (ogologo) ma ọ bụrụ na mgbe 3 gachara -3 anyị kwụsịrị 5 ogologo.
Ma ọ bụ ọ bụrụ na mgbe -1 abịa, + 2 anyị ejirila ogologo abụọ gbagoo.
Na omume, ọnụ ọgụgụ a na-enye gị ohere ịgbaso usoro ọ bụla nke otu onye na-ere ahịa iji ghọta ma ọ bụrụ na ọ 'họọrọ' anya ọdịda.
N'ịtụle ọnụ ọgụgụ gara aga, enwere m ike ịchọpụta ngwa ngwa, dịka ọmụmaatụ, na Croupier a na-enyocha nwere mmasị maka ogologo -1, 0 na -2 na mpịakọta oge elekere na mmasị maka ogologo -1, 0 na -2 na elekere anya. ndị.
Ekwetaghị m n'eziokwu ahụ na n'ụzọ dị otú a ọ ga-ekwe omume ịchọpụta aka croupier 'na sayensị', Ọzọkwa m dokwuo anya na usoro a nke igwu egwu, ebe ọ bụ na enweghị nzọ mgbe a tụbara bọl ahụ, enweghị ihe ọ bụla metụtara ezigbo usoro anụ ahụ ballistics, mana naanị site n'ịkpọ ngalaba ahụ, anyị na-ebufe ụzọ anyị si egwu egwuregwu site n'ọhịa nke mgbakọ na mwepụ dị ọcha, na nke nnọchite geometric nke ịdịgide adịgide, na-enweghị ntụgharị a na-enye anyị uru mgbakọ na mwepụ bara uru karịa bench.
Ebee ka akụkọ ahụ dị? Kedu ihe kpatara anyị ji ewere usoro a maka egwuregwu ahụ? Ọfọn, m na-amalite site na nkọwa ndị na-adịchaghị mkpa: nke mbụ na nyocha m pere mpe ugbu a, na ogologo oge otu Croupier na-ewepụta ụzọ isii ọ bụla (+3 +2 +1 -1 -2 -3) na ọnụ ọgụgụ dịkarịsịrị nta, yabụ ị gaghị achọpụta (dịka o nwere ike ime na usoro anụ ahụ) nnabata dị mkpa site na pacenti pasent nke sortie nke nọmba 6 site na 37 (ihe dịka 16%); nke abuo, oghere na igbu oge ga - abu (mgbe nile na ogologo oge), dabara na ndi sestines nke amara anyi ji egwuri egwu, yabụ n’uche m ọnụọgụ niile mmemme ahụ nwere ike ịlele, nwere ike ịba uru nye mmadụ. ndị ụfọdụ echiche ọhụrụ nwere ike ịbịakwute, etinyewo m ha n'ihi na a rịọrọ m na nhazi oge, mana n'echiche m ha agaghị enye (ana m atụ anya na m hiere ụzọ) ihe ọ bụla bara uru maka atụmatụ mmeri na ogologo oge.
Ikike nke usoro egwuregwu a, n'aka nke ọzọ, na-egosipụta na nnọkọ otu na nkewa.
Na omume, site na ịlele eserese ahụ mgbe ị gachara ole na ole, ị nwere ike ịhụ usoro micro ma ọ bụ usoro micro nke roulette (ma ọ bụ Croupier) na-edobe maka oge dị oke oke, mana oge ụfọdụ zuru oke maka mwakpo bara uru.
Openlọ nyocha na-emeghe
Ekwenyere m na ọ dị mkpa na a naghị ewere mmemme a dị ka usoro egwuregwu egwuregwu, mana kama dị ka ụlọ nyocha nke echiche mgbe niile, ebe onye ọ bụla nwere ike inye aka na nghọta ọhụrụ ọhụụ banyere otu esi enweta nsonaazụ kacha mma.
Ugbu a ị mụtala otu esi eji mmemme ahụ, ka anyị gaa nyochaa ngwa ndị enwere ike, otu n'ime ha ọkachasị, edekọwo nsonaazụ na-atọ ụtọ.
#Zọ # 1: singchụ efu
Ogologo uzo efu na-eme mgbe ọnụọgụgụ ugboro ugboro na maka nhọrọ kwesịrị ekwesị nke mmemme, mana karịa ka ị ghara iwepụ ihe ngosi anya nke eserese eserese site na ọnụnọ, usoro a anaghị ede ebe a, mana ọ bụrụ na ikwughachi ya ọnụ ọgụgụ na-apụta, a na-ewere ya dị ka ogbugba furu efu na otu ngalaba ahụ na-emegharị.
Agbanyeghị, zero nke m na-ekwu abụghị nke a, kama ọ bụ nke algebraic nchikota mepụtara ka a na-agbakwunye ya na-adịgide adịgide.
Ana m echetara gị na site na usoro a oge ọ bụla ị tụrụ aka n'otu ebe, otu ọnụ ọgụgụ isii dị iche iche na-ekwekọkarị, yabụ ọ bụrụ na ị tụọ anya -2 ugboro atọ n'usoro, ọnụ ọgụgụ ga-adị iche mgbe niile, n'ihi na ha jikọtara ọnụ ọgụgụ nke enyere na mbụ.
Nke a putara na enwere uzo di iche iche nke na adighi ihe ike na usoro nke uzo di iche iche na karia ime ka ha nile di n'otu, na-eme ihe mgbe nile na-akwanyere ikike nke uzo uzo obula na ibu algebraic nchikota nke ebe dị anya na efu (3 + 2 + 1-3-2-1 = 0), anyị ga-aga ịchụ nta efu efu karịa anya atọ.
Ka anyị were otu ihe atụ ozugbo:
A na-edebanye aha ezigbo akara na roulette na ntanetị n'ịntanetị.
Usoro a na nkenke, gụnyere igwu egwu maka ego efu (ma ọ bụrụ na ọ ga-ekwe omume) mgbe ụzọ abụọ apụla.
Na eserese dị n'elu, ị ga-achọpụta na nkwụsị nke izizi mbụ bụ + 3, wee soro -1, yabụ iji nweta nchikota efu, anyị ga-anọ n'oche -2 dị ka + 3-1-2 = 0.
Ozugbo anyị ga-eche anya ụzọ abụọ ọzọ wee pụọ -2 na + 1, ịnwe nchikota efu, anyị ga-enwe nzọ na ebe dị anya + 1, dị ka -2 +1 +1 = 0.
Ozugbo emesịrị, anya -3 ga-apụta ugboro abụọ n'usoro, yabụ na anyị agaghị enwe ihe ọ bụla, yabụ na mgbe e mesịrị, maka usoro -3 -2, anyị enweghị anya + 5 ịchọrọ.
N'ime nnọkọ a, onye na-ere ahịa na-ahapụ anyị na mkpụrụ ego 60 na-arụsi ọrụ ike (36 + 36 -12 iberibe nke nzọ abụọ).
O doro anya na iji mee ka ị ghọta usoro a nke ọma, emeela m usoro dị mma, mana ana m agwa gị na ihe ịtụnanya na obere oge (na nnọkọ nke otu onye na-ere ahịa) bụ oge iji nwee ọ frequentụ na-enweghị ọtụtụ nchegbu.
Agaghị m anọgide na usoro mbụ a n'ihi na ọ dị mfe ma tupu ị kpọọ ya, m na-akpọ gị ka ị mee ọtụtụ ule.
#Zọ # 2: untchụ nta maka ụkpụrụ micro
Usoro nke abuo nke usoro ihe omume a bu ihe a na-acho 'micro micro'.
Patternkpụrụ dị n'okwu anyị bụ ọnụ ọgụgụ, usoro ma ọ bụ usoro akọwapụtara, ya mere ebumnuche nke ụdị a bụ iji chọpụta ma zọọ nzọghachi nke omume ụfọdụ site na roulette (ma ọ bụ croupier).
Ka anyị lee eserese nke onye na-ere ahịa mepụtara n'oge ezigbo egwuregwu egwuregwu na cha cha cha cha.
O doro anya na anya na-enweghị uche nwere ike ọ gaghị ahụ kpọmkwem ihe m na-ahụ:
na ugboro anọ ebe dị anya -4 wee pụọ, ugboro atọ ozugbo ebe dị anya -2 pụọ, na ugboro 1 ebe dị anya -5 pụọ, ugboro atọ ọ pụtakwara ozugbo -3 anya. Mmasị ziri ezi?
Cheta otu ihe dị mkpa: nke a metụtara naanị nnọkọ otu Croupier anyị na-enyocha n'oge ahụ.
Na ogologo oge na Croupier (ma ọ bụ na wiil ahụ) ga-emepụta kpọmkwem usoro niile e buru n'amụma na ọkwa ọnụ ọgụgụ, yabụ ịnakọta ọtụtụ narị ntụgharị nke Croupier enyere wee chọọ ihe ntụgharị ọ bụla (ọkụ ma ọ bụ oyi oyi) enweghị uche, ọ nwere ike ime ezigbo mmega ahụ, mana atụla anya ịchọta croupier nwere ogwe aka nwere nkwarụ (ogwe aka adịghị mma), ebe lozenges anaghị anọ ebe ahụ na ndapụta ma ọ bụ ihe dị mma na nke a bụ ikpe.
Agaghị m abanye na uru nke njikwa ego iji nweta usoro a, m hụrụ onwe m n'anya iji ego ụlọ akụ egwu, yabụ bido na opekempe nke okpokoro m ga-egwu na-emeri mmeri nke kachasị strok abụọ na m ga-eme jiri nwayọ na-abawanye uru nke otu ibe.
Echere m na usoro a dị mfe, ọ dị oke mkpa iji mee ka anya were mata ngwa ngwa 'usoro micro' (micro n'ihi na ha nwere naanị isi abụọ), iji ghara ịlafu ọbụlagodi ohere ọ bụla na nnọkọ ọ bụla na-enye mgbe niile.
Na njedebe nke nkọwa nke usoro nke abụọ a, nke a bụ eserese ọzọ (nke sitere na ezigbo nnọkọ n'ezie) nke gosipụtara na agba agba nke m kọwapụtara dị ka usoro micro: otu agba ahụ kwekọrọ n'otu akụkụ (ụkpụrụ).
#Zọ # 3: Symmetries dị mgbagwoju anya
Ihe ndị a bụ n'uche m usoro kachasị mma maka mmemme ahụ.
Ọ ka mma n'ihi na ọ bụ nke nwere ike inye ohere, ọ bụrụ na Croupier bụ nke ziri ezi, ịnweta nnukwu uru ka ị na-aga ịchụ nta maka agba atọ na-emeri n'usoro site n'ịgba nzọ ihe niile na agba ọzọ.
Buru n’uche na imeri akara 3 n’usoro pụtara na ị ga-emeri nkeji 1.296 (ị ga-etinye nkeji 1-6-36 na nọmba ọ bụla) site na uru nke 215 ugboro nzọ mbụ, ọ dịka ịbanye na cha cha na 100 euro ma hapụ ya na 21.500!
Ọfọn, ọ dịghị mfe, mana dịka anyị ga-ahụ ma emesịa, ọdịiche a na-enye ohere nke mmeri dị ịtụnanya, ekwesịrị iji ya mee ihe n'ụzọ kwesịrị ekwesị: ọ dị ka ịnya ịnyịnya igwe na-agba naanị otu skuuta mgbe niile, ewezuga na mbụ euphoria, Ee, ọ nwere ike imerụ ahụ!
Ok achoghi m imenye gi egwu, obu nani oke oku ka ị kpachara anya, n'ihi na, dika i gha ahu n'onwe gi, ebe a ị nwere ike imebi casinos.
Usoro a bụ: a na-achọ akụkụ eserese eserese, na ịchọ 'ụkpụrụ macro', yabụ na-adịkwaghị na usoro gara aga, ngalaba nke naanị 2 isi (micro), mana a na-achọ usoro ịghaghachi ogologo.
Tupu ị hụ ụfọdụ eserese, ọ dị mma ịkọcha ihe pụtara symmetry na geometry: e nwere ụdị abụọ nke symmetry, axial symmetry na Central symmetry.
Onye nke mbu gbasara ugwu kwụ ọtọ, akpọrọ axis nke symmetry, nke abụọ gbasara otu isi okwu, akpọrọ center of symmetry.
Kedu ka ị ga-esi mata akara ngosi aha na-emetụta akara ma ọ bụ isi okwu?
Otu axis nke symmetry bu uzo di anya nke na-ebipu onu ogugu na uzo abuo, nke apuru idocha ya.
Otu triangle equilateral na-ekweta anyụike atọ nke symmetry, a na-abụghị equilateral isosceles triangle na-ekweta naanị otu axis nke symmetry: ịdị elu n'ihe banyere isi; otu isosceles trapezoid na-ekweta naanị otu axis nke symmetry, nke bụ axis nke ntọala ya.
Site na usoro a na omume anyị na-achọ iberibe usoro na ọgba aghara nke sitere na ndapụta.
Dị ka anyị ga-ahụ n'oge na-adịghị anya, ọ bụ naanị ụdị ọnụọgụ atọ ka enwere ike ịmepụta na eserese: triangles, trapezoids na, n'ozuzu ya, ngalaba na ngalaba agbajiri agbaji nke ụdị na ogologo dị iche iche.
Yabụ ụdị symmetry na-amasị anyị bụ naanị nke mbụ, ya bụ axial symmetry.
Nke a bụ ụfọdụ eserese nke ezigbo ndekọ iji ghọta nke ọma ihe anyị na-ekwu:
N'ihe ngosi na ihe akaebe, ejiriwo m ahịhịa ndụ na-acha akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ ụfọdụ nke axis nke symmetry (n'ezie, e nwekwara ndị ọzọ) nke ọnụ ọgụgụ geometric ndị e guzobere, ka anyị depụta ha:
isosceles trapezoid nwere obere isi na elu;
ọgụgụ / akara nke isi ihe atọ;
isosceles triangle nwere vertex na elu;
ọnụ ọgụgụ nke isi ihe anọ (ọ dị ka zeta slanted).
Yabụ, ọ bụrụ na achọrọ m imechi mmechi nke akara akara m ga-egwu:
Ihe osise 1: ebe dị anya -2 mgbe ụzọ ọpụpụ nke atọ nke isi anọ na-ede ya, nke ahụ bụ -2 +2 +2;
Ihe osise 2: ebe dị anya +2 ​​mgbe ụzọ ọpụpụ nke anya + 2 +2;
Ihe osise 3: ebe dị anya -3 mgbe ọpụpụ nke ebe ndị dị anya -3-1;
Ihe osise 4: ebe dị anya -2 mgbe ọpụpụ nke ebe ndị dị anya -2 +2;
Ihe osise 5: ebe dị anya -2 mgbe ọpụpụ nke ụzọ atọ -2 -3 -1;
Dịka ị pụrụ ịhụ, eserese a juputara na ọnụ ọgụgụ na-enweghị atụ ma egosighi m ụma gosipụta triangle isosceles na akụkụ ahụ dị ozugbo trapezium na akụkụ nke isi ihe atọ ga-ebili ozugbo eserese 3.
Ọnụ ọgụgụ niile edepụtara (ma e wezụga nọmba 5) bụ nke kachasị na-agakarị na ị ga-ahụrịrị ha na eserese ọ bụla.
Ugbu a, ka anyị chọọ ụfọdụ ihe mgbagwoju anya ndị ọzọ:
Na onu ogugu a gbara gburugburu nke 1, akara site na uzo -2 na-agbago site na onodu abuo ka uzo +1, wee gbadaa rue ala -1 ma gbagoo kpomkwem uzo abuo iji pesota +2.
Na nke a, mgbe ụzọ dị anya -2 na + 1 nke isi ihe abụọ mbụ, a na-akpụ akara ngosipụta na akara + 2.
Buru n'uche na site na anya -2 ruo n'ebe dị anya + 1 enwere naanị ọnọdụ abụọ ọbụlagodi ma ọ bụrụ na ha kwekọrọ na mpaghara atọ na eserese ahụ, n'ihi na akara efu anaghị adị mkpa mgbe niile, nke a na-agbagha eserese ahụ, mana o zuru ezu iji ghọta esi gụọ.
Na onu ogugu abuo o di nfe ighota na ihe emeputara na nke ano ya na ikwughachi ihe di anya +2.
Ihe osise nke atọ, n'aka nke ọzọ, nwere usoro nhazi a: ọ na-amalite site na anya + 1 wee gbadaa n'otu ọnọdụ ruo ebe dị anya -1 (cheta ihe a ka kwuru maka akara efu), wee laghachite n'ebe dị anya + 3 na wee gbadaa ọzọ site na otu. ọnọdụ ruo ebe dị anya +2.
Ntị: ekwesighi iji usoro egwu a mee ihe na roulette na ntanetị nke sọftụwia jikwaa, nAnwala ọbụna iji ya megide ngwanrọ, dịka ụzọ niile dị n'ụwa, megide sọftụwia naanị ihe nchekwa abụghị igwu ma ọ bụ ịbụ onye njikwa nke cha cha.
Jiri ya na ntanetị dị na ntanetị, ebe ezigbo croupier na-atụba bọl ahụ, na-akpachara anya iji zere wiil ndị ahụ roulette ebe a na-eji bọl na-enwu gbaa, nke na-ada n'etiti igbe dị iche iche, na-awụli elu tupu ya emechaa nke ya.
Y’oburu n’echiche na ihe ichere bu ihe nadighi ama, lee ndi ozo ndi ozo.
Achọghị m ịga n'ihu, enwere m olileanya na m enwela oke nghọta banyere ikike ọhụụ ọhụụ a maka egwuregwu nke roulette.
O doro anya na m na-akwado ịkpachapụ anya nke ukwuu na karịa ihe niile m na-akpọ gị, tupu ịmalite ịkụ nzọ dị egwu, ịzụ onwe gị ka ị mụta ozugbo ịmata ụdị micro na macro nke onye ọ bụla croupier na-emepụta n'oge nkedo ya.
Nke ahụ bụ ihe niile n'ihi na ugbu a, n'ihi na ihe ọ bụla nkwado mkpa dị ka ị maara na m mgbe niile na gị mkpofu site ►ụdị ịkpọtụrụ.
Nbudata Nbudata	DSTracker.zip - 4 MB